Trend / Amathrendi - Potato System Magazine
Kuvele umthengisi omusha eRussia
main Isihloko Umkhuba / Amathrendi
Njalo ngonyaka, abalimi abaningi bamazambane baseRussia balahlekelwa yingxenye yesivuno sabo ngenxa yokulimala sekwephuzile. I-ejenti eyimbangela yokulimala sekwephuzile inokuhlukahluka okuphezulu kakhulu kofuzo, okukuvumela ukuthi ihlale ...
Emakethe "Umlimi waseYaroslavl". Inenzuzo futhi imnandi
Ungawuthengisa kanjani umkhiqizo wakho epulazini elincane uma abathengi bengafuni ukuya ezimakethe nasemibukisweni phakathi kwalolu bhubhane? Joyina amabutho ...
Izikhungo zesayensi namanyuvesi aseRussia angazuza ama-ruble ayizigidi ezingama-140. iminyaka emine ukudala izikhungo zokuzalela imbewu nokuzalanisa ...
UMnyango Wezolimo uphakamisa ukuxhasa ukukhiqizwa kwemikhiqizo ephilayo
NgoMashi, uMbuso uDuma angacabanga ekufundeni kokuqala umthethosivivinywa wemikhiqizo yezolimo enezici ezithuthukisiwe - imikhiqizo ephilayo. UMbuso Duma ngoMashi ...
Ochwepheshe babikezela ukwanda kwendawo yokusetshenziswa kwemikhiqizo yokuvikela izitshalo eRussia
Indawo yokusetshenziswa kwezibulala-zinambuzane zenkampani "Agasti" ngokwelashwa okukodwa sekuyirekhodi. Kwaba cishe amahektha ayizigidi ezingama-48. Ngaleso sikhathi ...
Ucwaningo lwe-Robotic agrochemical
Ubuchwepheshe bocwaningo lwenhlabathi yedijithali busiza umkhiqizi wezolimo ukukhulisa amandla emvelo okuzala komhlaba. Ngasikhathi sinye, umnyombo wobuchwepheshe bedijithali ukudala ...
IRosselkhozbank ne "Magnit" bazokweseka abalimi
I-Rosselkhozbank kanye ne-Magnit retail chain basayine isivumelwano okuhloswe ngaso ukuxhasa nokwazisa ngemikhiqizo yasemapulazini ezitolo ezidayisa ngamatshe. Njengengxenye yelungu ...
U-Azbuka Vkusa uhlaziye izitayela zokudla zango-2021
U-Yekaterina Lomakova, Iphini Likamongameli Wezokuhweba Imisebenzi ka-Azbuka Vkusa, uqhakambise izinguquko ezingaba khona zezinguquko ezintweni ezithandwa ngabathengi ngonyaka ozayo ka-2021. Ukuhlolwa okuningi ...
UMkhandlu Kazwelonke Wezizwe Ezihlangene umemezele unyaka wama-2021 uNyaka Wezithelo Nemifino Womhlaba Wonke
UNobhala-Jikelele weNhlangano Yezizwe u-Antonio Guterres, emyalezweni wakhe ngalesi sihloko, uqaphele ukuthi izithelo nemifino ...
Ukuhlolwa kokuqhathanisa kwe-agroecological yezinhlobo zamazambane zesimanje zokukhethwa kwasekhaya nakwamanye amazwe
U-Evgeny Simakov, uMcwaningi Oyinhloko, iNhloko yoMnyango Wezokuhlolwa Kwezimbiza ZaseGene Yamazambane, i-Federal State Budgetary Scientific Institution "FRITS of Amazambane aqanjwe A.G. Lorkha ", Udokotela Wezesayensi Yezolimo, uSolwazi One ...
Ikhasi 1 koku-4 1 2 ... 4 Okulandelayo